Mgbanwe nke iwu NV na oke nwoke / nwanyị | Law & More B.V.
blog » Idegharị iwu NV na oke nwoke / nwanyị
Na 2012, iwu BV (ụlọ ọrụ nkeonwe) ka emeziri ka ọ dị mfe. Site na ike nke Iwu na Simplification na Mgbanwe nke Iwu BV, enyere ndị nwere oke ohere ịhazi mmekọrịta ha na ibe ha, nke mere na e mepụtara ọtụtụ ụlọ iji gbanwee usoro ụlọ ọrụ na ọdịdị ụlọ ọrụ yana mmekọrịta mmekọrịta. nke ndị nwere oke ego. N'ikwekọ na mmetụ a na mmụgharị nke iwu BV, mmezi nke NV (ụlọ ọrụ ọha na eze) dị ugbu a. N'ebe a, iwu mmebe iwu na-emezi iwu NV na usoro nwoke na nwanyị kwesịrị ekwesị ga-eme ka iwu NV dị mfe ma na-agbanwe agbanwe, nke mere na mkpa ndị dị ugbu a nke ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ (NV), ma edepụtara ma ọ bụ na edeghị. , nwere ike zute. Tụkwasị na nke ahụ, iwu iwu na-ezube ime ka ọnụ ọgụgụ dị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nọ na nnukwu ụlọ ọrụ buru ibu. A ga-atụle mgbanwe ndị ọchụnta ego nwere ike ịtụ anya n'ọdịnihu dị nso gbasara isiokwu abụọ ahụ a kpọtụrụ aha n'okpuru.
Isiokwu maka idegharị nke NV iwu
Na ndegharị nke NV iwu n'ozuzu metụtara iwu na oru buu igba n'ulo na-enwe na omume dị ka isi mgbochi, dị ka nkọwa ndetu na amaghị. Otu n'ime nsogbu dị otu a bụ, dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ nke ndị na - ere ihe pere mpe. N'ihi nnwere onwe dị ukwuu nke nhazi nke dị ugbu a, ha na-etinye ihe ize ndụ nke ịbụ ndị ọtụtụ na-emekpa ahụ, ebe ọ bụ na ha ga-erubere ndị ka n'ọnụ ọgụgụ isi, ọkachasị mgbe a na-eme mkpebi na nzukọ izugbe. Iji gbochie ikike ndị dị mkpa nke (ndị pere mpe) ndị nwere oke nọ n'ihe ize ndụ ma ọ bụ ọdịmma nke ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ndị a na-emegbu emegbu, atụmatụ Modernization NV Iwu na-echekwa obere onye na - ekenye ya site, dịka ọmụmaatụ, chọrọ nkwenye ya.
Ihe mgbochi ọzọ bụ oke iwu oke ego. N'ebe a, atụmatụ ahụ na-enye nghọta, nke ahụ bụ ịsị na isi ego nke etinyere n'isiokwu nke mkpakọrịta, ịbụ nchịkọta nke ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ nke ngụkọta ọnụ ọgụgụ, agakwaghị abụ iwu, dịka ya na BV. Ebumnuche dị na nke a bụ na site na iwepu ọrụ a, ndị ọchụnta ego na-eji ụdị iwu nke ụlọ ọrụ ọha na eze (NV) ga-enwe ohere karịa iji bulie isi obodo, na-enweghị iwu ga-ebu ụzọ gbanwee. Ọ bụrụ na isiokwu nke mkpakọrịta ga-ekwu isi obodo, otu ụzọ n'ụzọ ise ga-abụrịrị na iwu n'okpuru iwu ọhụrụ ahụ. Ihe niile achọrọ maka isi obodo a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ agbanweghị agbanwe n'ihe gbasara ọdịnaya ma ha ga-eru ,45,000 XNUMX.
Na mgbakwunye, echiche a maara nke ọma na iwu BV: mbak nke aha a kapịrị ọnụ a ga-etinye ya na iwu NV ọhụrụ. Enwere ike iji aha akọwapụtara iji tinye ikike ụfọdụ maka mbak n'ime otu (ma ọ bụ karịa) klaasị, na-enweghị mkpa ịmepụta klaasị ọhụụ. Ekwesịrị ịkọwapụta ikike dị na ya kpọmkwem na isiokwu nke mkpakọrịta. N'ọdịnihu, dịka ọmụmaatụ, onye na-ejide oke mbak nwere aha pụrụ iche nwere ike inye ikike ịchịkwa pụrụ iche dịka akọwara na isiokwu nke mkpakọrịta.
Ihe ọzọ dị mkpa nke NV-iwu, mmegharị nke a gụnyere na nkwenye, nchegbu ikike ịtụ vootu nke nkwa na usufructuaries. Mgbanwe a bụ n'ihi n'eziokwu na ọ ga-ekwe omume inye ikike ịtụ vootu ikike ma ọ bụ tinye ya n'ọrụ n'oge na-esote. Ndozigharị a dịkwa n’usoro iwu BV dị ugbu a yana, dịka nkọwa nkọwa si tụpụta, na-egbo mkpa ọ ga-abụrịrị na ọ nọ na-eme ruo oge ụfọdụ. Tụkwasị na nke ahụ, atụmatụ ahụ chọrọ imekwu ka o doo anya na nke a na inye ikike ịme ntuli aka n'ihe banyere ikike nke nkwa na mbak nwekwara ike ime n'okpuru ọnọdụ na-enweghị atụ mgbe e guzobere ya.
Tụkwasị na nke ahụ, ime ka ngosipụta nke NV Iwu mee ihe nwere ọtụtụ mgbanwe gbasara ịme mkpebi. Otu n'ime mgbanwe ndị dị mkpa na-echegbu, dịka ọmụmaatụ, ịme mkpebi na mpụga nzukọ ahụ, nke kachasị mkpa maka NV ndị ejikọtara na otu. N'okpuru iwu dị ugbu a, enwere ike ịme mkpebi naanị na mpụga nzukọ ma ọ bụrụ na isiokwu nke mkpakọrịta kwe ka nke a, ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere mbak ma ọ bụ nyefee asambodo na mkpebi ga-ewere otu olu. N'ọdịnihu, site na itinye ike nke atụmatụ ahụ, ịme mkpebi n'èzí nzukọ ahụ ga-ekwe omume dị ka mmalite, ma ọ bụrụhaala na ndị niile nwere ikike nzuko kwenyere na nke a. Ọzọkwa, atụmatụ ọhụrụ ahụ nwekwara atụmanya nke nzukọ na mpụga Netherlands, nke bara uru maka ndị ọchụnta ego na mba NV na-arụ ọrụ.
N'ikpeazụ, ụgwọ ndị metụtara mgbakwunye a na-atụle n'atụmatụ ahụ. N'ihe banyere nke a, atụmatụ ọhụrụ banyere ime ka ikike iwu nke NV dị ugbu a mepee ohere nke ụlọ ọrụ ga-akwụ ụgwọ ndị a na akwụkwọ mmakọ. N'ihi nke a, a na-ahọpụta nnabata dị iche iche maka njikọ nke ngalaba. Na ngbanwe a, enwere ike ihichapụ ọrụ iji kwupụta mmefu ego maka ndekọ aha azụmaahịa maka NV, dịka ọ mere na BV.
Nhazi oke nwoke na nwanyi kari
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ịkwalite ụmụ nwanyị n'elu bụ isi isiokwu. Agbanyeghị, nyocha emere na nsonaazụ ahụ egosila na ha nwetụrụ nkụda mmụọ, nke mere na ụlọ ọrụ Dutch chere na a manyere ya iji atụmatụ a kwalite ebumnuche nke ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọ n'elu azụmaahịa ya na Modernization nke iwu NV na oke nwoke na nwanyị . Ebumnuche dị n’azụ nke a bụ na iche iche na ụlọ ọrụ kachasị elu nwere ike ibute mkpebi ka mma na nsonaazụ azụmaahịa. Iji nweta ohere nha anya na ịmalite ọnọdụ maka onye ọ bụla na ụwa azụmahịa, a na-ewere usoro abụọ na atụmatụ ahụ dị mkpa. Nke mbu, a gha acho ka ndi nnukwu ulo oru ndi nwere ikike ichoputa onu ogugu kwesiri ekwesi maka ndi isi ochichi, ndi nlekota oru na ndi isi. Na mgbakwunye, dị ka atụmatụ ahụ si dị, ha ga-emekwa atụmatụ doro anya iji mejuputa ndị a ma bụrụ ndị doro anya banyere usoro a. Ogologo nwoke na nwanyi n'ime ụlọ ọrụ nlekọta nke ụlọ ọrụ ndị edepụtara ga-etolite ma ọ dịkarịa ala otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị. Dịka ọmụmaatụ, otu ndị nlekọta nke mmadụ atọ mejupụtara n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ọ gụnyere ma ọ dịkarịa ala otu nwoke na otu nwanyị. N'ebe a, dịka ọmụmaatụ, nhọpụta nke onye otu na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọrụ na-anaghị etinye aka na nnọchite nke opekata mpe 30% m / f, nhọpụta a abaghị uru ma bụrụ ihe efu. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na mkpebi ahụ nke abaghị uru na-emetụta onye otu ndị nlekọta na-elekọta ọrụ.
Na mkpokọta, idegharị na ịdebe iwu nke iwu NV pụtara mmepe dị mma maka ụlọ ọrụ na-egbo mkpa ndị dị ugbu a nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ọha na eze nwere oke. Agbanyeghị, nke a anaghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ihe ga-agbanwe maka ụlọ ọrụ ndị na-eji ụdị iwu nke ụlọ ọrụ ọha na eze (NV). Ga-achọ ịma ihe mgbanwe ndị a na - abịa n'ihu pụtara n ’ụlọ ọrụ gị nke ọma ma ọ bụ kedu ọnọdụ nke oke na nke nwanyị n’etiti ụlọ ọrụ gị? You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara atụmatụ ahụ? Ka obu ihe ichoro ichoro ime ka amara banyere iwu nke NV? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara n'ọhịa nke iwu ụlọ ọrụ ma nwee obi ụtọ inye gị ndụmọdụ. Anyị ga-elekwasịkwa anya na mmepe ndị ọzọ maka gị!
Previous Post Ikpuchido Nzuzo ahia: Gini ka I Kwesịrị Knowmara?
Next Post Ndobe nke isiokwu